ထက်လူနှင်. အတွေး သံသရာ...အပိုင်း ( ၁ ) | LAMINTAYAR
Posted by lamintayar at 8:19 AM Labels: ရေးမိရေးရာ ဝတ္ထုတို......
ဒီနေ.ဟာ ထက်လူ ရဲ. အားလပ်ရက်ဖြစ်ပါတယ် ညက ကွန်ပြူတာရှေ.မှာထိုင်ခဲ.တဲ. နာ၇ီပေါင်း များစွာက ဒီမနက်မှာ မထနှိင်အောင် တော်တော်နေမြင်. တဲ.ထိအောင်အိပ်ပစ်လိုက်တယ်..
အိပ်ရာ ထတော. အစားတစ်ခုခု စားလိုက်တယ် စိတ်တွေထဲမှာမွန်းကျပ်နေတယ် အလုပ်နဲ. လိုအပ်ချက်တွေမပြည်.ဝတဲ. ဆန္ဒတွေက စိတ်ဖိစီး မှု.ကိုတော်တော် ဖြစ်စေခဲ.တယ်လေ.........
ဒါနဲ. အပြင်ကိုထွက်ချင်နေတယ် အပြင်ထွက်ချင်ပေမယ်. လူတွေရှုပ်တဲ. စီးတီးဟော ကိုတော.မဟုတ်ပါ ဘယ်သွားမလဲ စဉ်းစားရင်အတွေးထဲမှာ စိတ်ကူးပေါက်လာသည်........ကမ်းခြေ ဟုတ်တယ် ကမ်းခြေ သွားမယ် ဒါနဲ. စီးတော်စက်ဘီး ကိုထုတ်ပြီး မဝေးလှ တဲ. Eunos မှ East coast ကိုထွက်ခဲ.တယ် မဝေးဘူးဆိုပေမယ်. နာရီဝက်လောက်ထိ ထက်လူ နင်းလိုက်တဲ.အချိန်မှာ ကမ်းခြေ ကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်ခဲ.ပြီိပေါ. ..
ဒါနဲ. Seven eleven မှာ မုန်.နဲ. အအေးဝယ် ပြီး နေရာအတွက် ကျောက်ဆောင်ပေါကို ရွေးခဲ.တယ်.....အားလပ်ရက်ဆိုတော. လူတွေလဲများလိုက်တာ မြန်မာတွေလဲ ဟို တစဒီတစ တွေ.တယ် တချို.လဲ ရေထဲမှာ ဆင်းကူးနေကြသလို တချို.လဲ သဲသောင်ပေါမှာ အိမ်လေးတွေဆောက် သူကဆောက် ဘောလုံးကန်သူကကန်နဲ.ပေါ. ထက်လူ ကတော. ကျောက်ဆောင်ပေါထိုင်ရင်း သိပ်မဝေးတဲ. ပင်လယ်ထဲက သဘောင်္ ကြီးတွေကို ငေးနေမိတယ် အော်...... စကာင်္ပူ ချမ်းသာလိုက်တာနော် နှိင်ငံလေးက ကျဉ်းပေမယ်. ..... ထက်လူ ရဲ.အမိနှိင်ငံတော်ကြီးသာဒီလိုဆိုကောင်းမှာပဲတွေးနေ မိပြန်တယ်......ဒီလိုနဲ. ပင်လယ်ထဲကနေ ကောင်းကင်ပေါကိုကြည်.မိလိုက်တော. လေယာဉ် တွေတွေ.တော.တွေးမိပြန်တယ် လွမ်း သလိုလို ဆွေးသလိုလို နေရတာတမျိုးကြီး ခံစားလိုက်ရတယ် ........စကာင်္ပူ ၇ဲ.လေယာဉ်ကွင်း က ကမ်းခြေနဲ.လဲနီးတာကိုး ကွင်းဆင်းမယ်ဆို ပင်လယ်ပေါကပဲဖြတ်တာကိုး ၅မိနစ် တဆင်းလောက်ဖြတ်တယ် ပေါလိုက်တဲ. လေယာဉ် အဝင်အထွက် ဒါနဲ. အတွေးကဆက်ပြီးးးး............ လွမ်းလိုက်တာ မေမေရယ် အချိန်မတန်သေးတော. သားတို.မိသားစုလေးနဲ. ဝေးတဲ.တနေရာမှာခွဲနေ ရတဲ.သားဟာ မေမေ. ကိုလွမ်းနေသလို သားကိုအရမ်းချစ်တဲ.မေမေလည်း လွမ်းနေမယ်ဆိုတာ သိနေတယ်လေ...တချိန်မှာ မေ.မေ. ကို သားလုပ်ကြွေးပြုစု နှိင်ဖို. ရေမြေခြားတနေရာမှာ ပညာရှာရင်း အလုပ်ကိုလည်း မပျက် ကြိုးစားနေတယ် မေမေ ဒါဟာ သားတို. မိသားစုလေးအတွက် ပျော်ရွင်ဖွယ် အနာဂတ်အတွက် မျော်လင်.ချက်လေးပါ.......
ထက်လူ တို.မှာ မိသားစု ၄ ယောက်ရှိပါတယ် ညီမလေး တယောက်ရယ် ထက်လူရယ်ပေါ. မေမေက မွေးတုန်းက ၃ ယောက်ပါ အစ်မအကြီးဆုံး က မွေတုန်းမှာ ပဲဆုံးသွားရှာတယ်လေ မောင်နှမတွေက ၄ နှစ်ခြားစီပေါ. အစ်မကြီးတယောက်ဆုံး သွားပြီ့းတော. ထက်လူ ကို မေမေ မွေးခဲ.တယ် ထက်လူလဲအသက် မပါဘူး လို ထက်လူ ကြီးလာတော.မှ မေမေ တို. ပြောပြလို.သိခဲ.ရတယ် ဆရာဝန် တွေက အသည်းအသန် ရိုက်ပုတ်ပြီး အသက်ရှုအောင် မနည်းလုပ်လိုက်ရတယ်ပြောတယ် အဲ.တော. မှ ထက်လူ ' အဲအဲ' ဆိုပြီး ငို သံထွက်လာပြီး အသက်ရှု နှိင်ခဲ.တယ်လို မေမေ ကပြောပြတယ်....
အခု ဆိုရင်တော. ထက်လူ မှာ ညီမလေး တယောက် ပါရှိနေပြီလေ...ညီမလေးနာမည်က မေဂျွန် ပါ အခုဆို Central Co-operative College second year တက်နေပြီပေါ. ... ညီမလေးက ၄နှစ်သာ ကွာပေမယ်. ရွယ်တူပါပဲ...လူ ကထွားတယ်...ဒါပေမယ်. သိပ်မတည်.ဘူး မကြာခဏလို စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်တယ် ဒါပေမယ်. ထက်လူ ညီမလေးကိုအရမ်းချစ်ပါတယ် ဒီညီမလေးတယောက်ပဲ၇ှိတာကိုး....ဒါပေမယ်. ထက်လူ အစ်မကြီးတယောက်မေတ္တာ ကိုလိုချင်မိတယ် ဂရုစိုက်မှု. ထိန်းကွပ်မှု. မိဘလိုတော. ဘယ်ဟုတ်မလဲ နွေးထွေးမှု.ပေါ. မိဘကတော.နှိင်းလို. မရဘူးလေ....
ထက်လူ တို.က ရန်ကုန်နဲ.မနီးမဝေး လှည်းကူး မှာနေပါတယ်...ထက်လူ ငယ်ငယ်က အငိုသန် လို. မေမေက ဖိုးငို လို.လဲ ခေါပါတယ် လူ ကဝလဲဝတော. ဝကြီးလို.လဲ ခေါပြန်တယ် ဒီနာမည်ကိုတော. ဖေဖေ အမျိုး တွေဘက်ကပဲခေါကြတာပါ... မေမေဘက်ကမခေါကြပါဘူး ...ထက်လူ ဘဝမှာလိုလေသေး မရှိအောင် မေမေ ကထားပါတယ် စိတ်အညို မခံဘူးမေမေက သားသမီးတွေကို အလွန်ချစ်တယ်လေ.....လိုချင်တာကို အနှေးနဲ. အမြန် ရအောင်ဖြည်.ဆည်းပေးတယ် မေမေ က သားသမီးတွေအပေါ နားလည်မှု. အပြည်.ရှိတယ် ဖေဖေက တော.အဲ.လိုမဟုတ်ဘူး ဟိုဟာဝယ်ပေးရင်ဝယ်ပေးပြန်ပြီ ဒီဟာဝယ်ပေးရင်ဝယ်ပေးပြန်ပြီ...ပြီးတော.လူငယ် တွေရဲ. သဘောသဘာဝ စိတ်နေစိတ်ထားကိုလည်း နားလည်မှု.မရှိဘူး မေမေက အဝတ်အစားဝယ်ပေးရင် သူပါဝယ်ပေးမှ အဲ.လိုကြီး ဖေဖေက လူတစ်မျိုး..ဒါပေမယ်. မပစ်မှားပါဘူး မိဘတွေလေ....တခါတလေတော. ဖေဖေ စကားတွေကြောင်. ငိုခဲ.ရဖူးတယ်....ဖေဖေ ကချစ်ပါတယ် သားသမီးတွေပဲလေ ငါ.သားကြီး ကြီးလာရင် စစ်ဗိုလ် ကြီးလုပ်မှာကွ ဆိုပြီး နမ်းနမ်းပြီး ပြောတယ် တခါတလေ ချီပါချီတယ် ကြီးတဲ.အရွယ်ထိ ပေါ.... ဘယ်လိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလူ.လောကကြီးမှာ ကိုယ်လက်အဂါင်္ အစုံစွာနဲ. လူလားမြောက်အောင် ကြွေးမွေး ပြုစု ခဲ.သော မိခင်နဲ. ဖခင် ကို ထက်လူ ဘယ်နေရာရာရောက်ရောက် အိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ဦးညွတ်ရှိ ခိုးပြီးမှ အိပ်ပါတယ် ......အင်း လွမ်းလိုက်တာ ချစ်မေမေရယ်...ပြီးတော. ဖေဖေ နောက်ညီမလေး....ကျန်းမာပြီး ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ လို. သားဆုတောင်း ပါတယ် မေမေ...
layeik May 4, 2010 at 9:04 AM
ထက်လူ ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်း ပြည့်ပါစေ။အပိုင်း ၁ ဆိုတော့ အပိုင်း၂ ကလာဦးမှာပေါ့။ စောင့်ဖတ်ပေးမယ် မြန်မြန်ရေး။